Taariikh kooban oo ku saabsan abaalmarinta Nobelpris - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Taariikh kooban oo ku saabsan abaalmarinta Nobelpris Foto: AP Photo/Christie's/TT
La daabacay tisdag 6 oktober 2015 kl 10.16
Alfred Nobel intii aynu geeriyoon waxa uu qoray dardaaran ah in hantidiisii noqoto sanduuq laga abaalmariyo hadba dadka nolosha wax ku soo kordhiya, ha noqoto aqoon ama hibooyinka dabiiciga ahe.
Abaalmarintii ugu horraysay waxa la bixiyay 10 diisambar 1901, shan sanno kadib dhimashadii Alfred Nobel. Tan iyo wakhtigaasna abaalmarintan waxa la bixiyaaa 10 bisha diisambar ee sannad kasta, inkasta oo aan abaalmarintan la bixin intii ay socdeen dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka.
Abaalmarintan Nobel-ka waxa la siiyaa dadka wax ku soo kordhiya shan qaybood oo aqoonta iyo nolosha ka mid ah. Waxa la siiyaa dadka wax ku soo kordhiya, cilmiga fiisigiska, cilmiga kimistariga, cilmiga fiisiyoolagiga ama dawooyinka, suugaanta iyo waliba nabadda.
Abaalmarinta fiisigiska iyo kimistariga waxa bixiya akamadamiga ciliga. Abaalmarinta dawooyinkana waxa bixiya maxadka Karolinska, halka ay abaalmarinta suugaanta ka bixiyo akadamiga Iswiidhan. Dhanka kale abaalmarinta nabadda waxa bixisa Norway Maxaa yeelay intii aanu Alfred dhiman Iswiidhan iyo Norway waxa ay ahaayeen midow.
Abaalmarinta dhaqaalaha ee Alfred Nobels ku suntan waxa la bilaabay sannadkii 1968, waxaana bilaabay bangiga qaranka Iswiidhan.
- Sharciga u yaalla abaalmarintani waxa uu dhigayaa in mawduuc kasta ugu badnaan abaalmarintan la siin karo uun saddex qof. Waxa iyana abaalmarintan la siiyaa ururrada.
- Dadka abaalmarinta helaa lix bilood gudaheed waxa ay jeediyaan qudbad.
- Marka laga yimaaddo 8 milyan ee la siiyo, qof kasta oo abaalmarintan ku guulaystaa waxa la siiyaa bilad ay farsamaysay Erik Lindberg iyo shahaado diblooma ah oo lagu dhiirrigelinayo qofka wax wanaagsan adduunka ku soo kordhiyay. Dadka abaalmarinta helaa iyana waxa ay abaalmarin u helaan bilad uu farsamaysay Gustav Vigeland, halka dadka abaalmarinta dhaqaalaha helaana la siiyo bilad ay farsamaysay shirkadda Gunvor Svensson-Lundqvist.
- Sannaddadii hore lacagta abaalmarinta ahi waxa ay ahayd 10 milyan oo karoon, laakiinse sannadkii 2012 ayaa lacagtaasi laga dhigay 8 milyan oo karoon, ilaa haddana waa 8 milyan oo karoon. Taasi oo ay ugu wacnayd lacag yaraan soo foodsaartay guddida abaalmarinta bixisa.
- Intii u dhaxaysay sannadkii 1901 ilaa sannadkii 2014 waxa la bixiyay abaalmarino dhan 567, waxaana la kala siiyay 814 nin, 46 dumar ah iyo 22 urur. Marie Curie waa gabadha kaliya ee Iswiidhish ah ee abaalmarintan helay wax ka badan hal jeer. Sidoo kale waxa jira dad kale oo iyana abaalmarintan ku guulaystay wax ka badan mar. Dadka ku guulaystay abaalmarinta suugaanta 10 ka mid ahi waa Faransiis, halka dhanka sayniska ay hormood ka yihiin hal-abuurada reer Maraykan oo tirada abaalmarintaas helayna waxa ay tiradoodu dhan tahay 257 qof.
- Dadka Iswiidhishka ah ee abaalmarintan helay waxa ay dhan yihiin 29 qof, 8 ka mid ahi waxa ay heleen abaalmarinta suugaanta, 5 ka mid ahina waxa ay heleen abaalmarinta nabadda, halka 16 ka mid ah dadka Iswiidhishka ah ee abaalmarintan helay dhan yihiin 16 qof.
Xigasho: TT/Wikipedia/nobelprize.org/Ne.se. Uppdaterad 2014-12-08